Samsung Galaxy Mini, fandefasana | Androidsis
Omaly dia nasehonay anao ny sarin'ny Samsung Galaxy Pro ary nasehonay anao ny sary voalohany. Saingy tsy ity no finday avo lenta vaovao avy amin'ny mpamokatra Koreana Tatsimo. Noho izany, anio dia te-hamita ny vaovao izahay amin'ny fanomezana anao ny fampahalalana rehetra tokony ho fantatrao momba ny Samsung GalaxyMini, izay efa noresahintsika nefa, raha ny loharanom-baovao isan-karazany, dia tsy ho ela intsony vao tonga. Raha ny tena izy, ny zava-drehetra dia manondro fa amin'ny andro vitsy ho avy dia halefa any Angletera izy, miaraka amin'ny mpandraharaha telefaona O2.
Raha omaly dia nilaza taminay izahay fa ny Galaxy Pro dia ho tonga hifaninana amin'ireo finday avo lenta amin'ny sehatry ny fandraharahana ary hampiditra kitendry QWERTY ara-batana, indrindra amin'ny BlackBerry Research in Motion (RIM), ny Galaxy Mini Natao hiatrehana finday mora vidy kokoa toa ny Sony Ericsson Xperia X10 Mini.
Toy ny Glaxy Pro, ny Galaxy Mini dia hihazakazaka Android 2.2 Froyo, na dia tombanana ho fanavaozana ny Android 2.3 Gingerbread tsy ho ela ny ho avy. Etsy ankilany, ny efijery an'ity smartphone Samsung vaovao ity dia hanana habe 3,14 santimetatra sy fatrany 320 × 240 piksela, hampiasaina miaraka amin'ny processeur 600 MHz Snapdragon, ary hanana fakan-tsary 3 megapixel vahaolana.
Avy amin'ny ozinina dia ho tonga miaraka amin'ny fahatsiarovana anatiny 2GB, fa azonao atao ny manitatra azy hatramin'ny 32 GB amin'ny alàlan'ny karatra microSD.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Galaxy Mini, fanombohana
Balt dia hoy izy:
Saingy tsy nivarotra an'i Yoigo ity finday ity nandritra ny herinandro ...?
Mamaly an'i Balt
MONTI dia hoy izy:
Eny, noraisiko an-tànana izany, tamin'ny faha-8, tamin'ny faha-15 nalaiko, manao portability aho.
Valiny amin'i MONTI
Ity finday ity dia azo apetraka amin'ny fahitalavitra misokatra na any Chile ……… .Ankarao fa tsara be ilay telefaona saingy mandeha amin'ny fantsona Espaniola madio izy ……
rodrigo36 dia hoy izy:
Mamaly an'i rodrigo36
Manana tele ve ity telefaona ity sa tsia?
dhv dia hoy izy:
Raha hampiasa ilay gpsd dia mila crédit ???
Mamaly an'i dhv
tsia, manana aho ary tsy mila an'izany mihitsy
M @ ri @ dia hoy izy:
hovidian'izy ireo ho ahy
Mamaly an'i M @ ri @
martitabrujilla dia hoy izy:
Alatsinainy ananako hatramin'ny farany
Mamaly an'i martitabrujilla
iza ianao? dia hoy izy:
Manana izany ho an'ny mpanjaka XD aho
Mamaly ny kien ere-nao?
PEPE NY RAHALAHY LEHIBE
MARA_FA dia hoy izy:
TIA JEJE MOBILE ITY
Valio amin'i MARA_PERO
Juanjo Edreira dia hoy izy:
Te hanana fomba fiasa aho
Valiny tamin'i Juanjo Edreira